Farshaxanka 'Couper-décaler', Debordo Leekunfa, wuxuu ahaa mid aad u caqli badan dhowr maalmood. Waxaa la qabtay Nofeembar 2, 2020, si looga xumaado xarigga DJ Volcano, saaxiibkii hore ee ugu fiicnaa DJ Arafat mar dambe ma siinayo wax calaamado nololeed ah warbaahinta warbaahinta ee kala duwan (Facebook iyo Instagram
Fannaanka sidoo kale laguma arag hal waddo oo Aidjan ah tan iyo markaas. Xaalad kicisay falcelinta qaar ka mid ah asxaabtiisa fanka.
"TANGSON-kayga aniga, sida aad ugu weydo weylaha halkaas, taasi waa sida aan kuu tabeyno." U fiirsashada waa inaan ku jecel nahay ”, Eunice Zunon ayaa heegan galisay. Waxaa xigay Jimcihii, Nofeembar 20 by foal ee soo saaraha quruxda badan Emma Dobré, Kerozen DJ: "Haddii aad seegto mimi qaranka sidoo kale, kaalay soo gal", ayuu soo dhigay Facebook.
Intaas waxaa sii dheer, dadka qaarkiis, iyagoo aaminsan in Debordo Leekunfa uusan ku dhicin jugtiisa koowaad, sidoo kale waxay ka xumaadeen aamusnaantiisa. “Debordo waa mid karti badan. Wuxuu leeyahay cod qurux badan laakiin dhibaatadiisa ayaa ah isaga oo aan lahayn joogteyn. Sida aan sidaas ugu waayi karno innaga oo aan raad ka tagin. Waxaas oo dhami waxay hortaagan yihiin horumarka xirfadiisa ”, faallo ka bixiyay isticmaale.
3 codsi si looga fikiro loona sii daayo xiisadda inta lagu jiro xabsiga
Waxaa khadka taleefanka kula xiriiray, ehelka fanaankan ayaa u sheegay Afrique-sur7, in Debordo Leekunfa uu si fiican ugu biiray Faransiiska kahor doorashadii madaxtinimada ee 31-kii October si loo sharfo qandaraas lagu saxiixay sumad Faransiis ah. Sida laga soo xigtay wada-hadalkeena, Le Mimi waa inuu ku laabtaa Abidjan bisha Diseembar dhamaadka dabaaldegga sanadka.
dj arafatsaaxiibka ugu fiican